Izinwele zezinwele ezinde ezihamba phambili zabesilisa, ukhetha ziphi? | Amadoda aSitayela
UPaco Maria Garcia | | Izitayela zezinwele
Abesilisa ngokuhamba kwesikhathi bakwazile ukubalekela izitayela zezinwele ezimfushane ezisheshayo; Bathole ezinweleni zabo enye indlela yokuzizwa bekhululekile futhi beyenga.
Izinwele ezinde zathola amandla ngokuhamba kwesikhathi futhi sebeshintshe ngisho nokwenza kwabalungisa izinwele babantu. Ochwepheshe abaningi kudingeke ukuthi babuyekeze isitayela sabo kanye nezixazululo kusika ukugcina amaklayenti.
Izithombe zamadoda anezinwele ezinde hlala njalo esixukwini. Ama-Gallants, anesibindi, obuhlakani, onesibindi, wobusha nokunye okuningi ungagqoka i-hairstyle ehehayo; iqiniso ukuthi ngandlela thile babamba intshisekelo yabo bonke abantu ababazungezile.
Kuyadingeka ukuthi labo abanesibindi sokujoyina le fashion entsha, bayithathe ngokungathi sína. Mhlawumbe abasadingi ukuvakashela umgundi wezinwele ukugcina ukusika, kepha badinga ukunakekelwa ukuze babonise izinwele ezicwebezelayo nezinempilo. Futhi lezi izindlela zokwelapha ezitholakalayo ukwenziwa ekhaya noma ngochwepheshe. Noma iyiphi indlela ekhethiwe, into ebalulekile ukugcinwa.
Ngo-2018 ukuthambekela kwezitayela zezinwele zamadoda yizinwele ezinde neziphakathi nendawo. Kunesikhathi sokukhula lapho isitayela sinzima, kepha sinjalo indaba yobuhlakani nesikhathi. Kancane kancane kuzokwazi ukuthola okungcono kakhulu kulokhu kusikeka kwanamuhla.
1 Izinhlobo zezinwele ezinde
1.1 Ukusika okungasendle
1.2 Inkantolo yesurf
1.3 I-Mun Hairstyle
1.4 I-Medium mane
2 Ama-trendsetter adumile anezinwele ezinde
3 Amathiphu okunakekela izinwele ezinde emadodeni
4 I-Hipster Sika: Izinwele Zabantu Ezide Zonyaka
Izinhlobo zezinwele ezinde
Kuyinto ekhethwe amadoda afuna ukuvela isitayela esingenankathazo. Ngokusobala abanikeli isikhathi sokulungisa izinwele, kepha empeleni bachitha isikhathi esiningi kunokucabanga ukubukeka kanjena. Uma izinwele ziqonde noma zihle, kunconywa ukuthi wenze ukusika emaphethelweni.
Kumadoda anamagagasi, lolu hlobo lwekhanda lusebenza kakhulu futhi kulula ukugqoka. Ama-roller anikela ngokunembile ivolumu oyifunayo nokubukeka kwendle.
Uma indoda inezici zobuso ezibucayi, hambisana nalesi sitayela nentshebe yosuku Imnika ubudoda.
Ukukhanya, izinwele ezi-wavy kuyindlela enhle. Abanye bagqoka umbala wemvelo ogezwe yilanga, abanye bangaphendukela kubenzi bezitayela ukugqamisa ukugqama okuthile. Kuyinto isitayela semvelo kakhulu esinobude obungalingani ezinhlangothini; Ngokuya ngomcimbi, ingagqokwa noma iboshwe.
Kubalulekile ungamaki imivimbo, kodwa ukuyilahla ezinhlangothini ezehlukene ngokusho kokukhula. Ngisho nakwiphathi ethile esemthethweni ebusuku ungasebenzisa ijeli ukulungisa.
Yisitayela esikhomba abesilisa abanezinwele ezinde kakhulu, inqobo nje uma benezinwele eziqaphile ukuze bangaweli emuzwa wokuphazamiseka. Kuyinto yekhanda ukuthi ivelela ubulula bayo nobuhle bayo. Kusuka ku-ponytail ukudlula kokugcina kusala ngaphandle kokucindezela; umphumela uba bun noma umsila ophindwe kabili.
Lesi sitayela sisetshenziswa kabanzi ngabesifazane namuhla. Ngokuvamile kukhethwa ukukhululeka nokunakekelwa kwezinwele ezinazo; Kusebenza bobabili ukuya emsebenzini usuku nosuku, kanye nephathi ebusuku.
Imininingwane emadodeni iyi- ungashiyi ingaphambili liqine kakhulu. Esikhundleni salokho, kufanele ikhululeke, ngaphandle kokuwa ebusweni.
Ochwepheshe abakhulu bemfashini bachaza lesi sinwele eside njengokuthambekela kwangempela kuka-2018. Ukubukeka okuhlukile kungenziwa futhi ukubukeka kwabesifazane kuqinisekisiwe.
Ubude balokhu kusika ngamasentimitha ambalwa ngaphezu kwehlombe. Izitayela ezingatholakala zingafani kuya ngendlela okhetha ukuyibumba ngayo. Ingasikwa iqonde noma ngesilinganiso, yize enye indlela kungamanisa ohlangothini, maphakathi noma emuva.
Ama-trendsetter adumile anezinwele ezinde
UJohnny Deep: ngobukhona bayo obuyimfihlakalo futhi obukhululekile ufaka izinwele ezinde njengezimpawu zomuntu siqu. Amagagasi alo ayinika ivolumu efanelekile ukuze yenze ibukeke ingcolile futhi ihle ngesikhathi esifanayo.
UChris Hemsworth: lo mlingisi usike ngokunyathela okudingekayo kulawo madoda anezinwele eziqondile. Isitayela sikuvumela thola ukunyakaza futhi ugqamise ukubukeka kobuso.
Umgodi kaBrad: Bekuyi omunye wabanduleli bezinwele ezinde phakathi kwabadumile. Ngokuhlukaniswa phakathi, kugcizelela umphumela ngokukhanyisa ezinye izinto ezinhle kakhulu; Ubuye wabonakala ngama-side bangs kweminye imicimbi.
IKit Harington: ngama-curls akhe uzuza umphumela opholile futhi ojwayelekile. Kepha empeleni usebenzisa isikhathi sakhe ekuhlanganiseni ngokucophelela; empeleni, sebenzisa imikhiqizo ekhethekile ukugcina isitayela sezinwele.
Amathiphu okunakekela izinwele ezinde emadodeni
Ukugqoka izinwele ezinde ezinesitayela, amanye amathiphu angalandelwa:
Khetha ngokucophelela imikhiqizo yokuwasha, ngokuya ngohlobo lwezinwele.
Ungakhohlwa thenga ama-conditioner ukwenza lula isitayela.
Ama-dryers awasetshenziswanga nsuku zonke ngoba bamzwisa ubuhlungu. Kufanele unikele isikhathi kulezi zikhathi.
Yize bengadingi ukuvakashelwa kaningi kumgundi wezinwele, kufanele njalo thinta izeluleko. Ngakho izinwele zingakhula ziphilile futhi ziqine.
Labo abaphethwe yizinwele kufanele sebenzisa imikhiqizo ukuqinisa.
Ungasebenzisi kabi ukusetshenziswa kwejel. Uma kunokwenzeka kusetshenziselwe kuphela imicimbi ekhethekile.
Yakha umkhuba wokuxubha umhlwenga njalo ebusuku. Lokhu kugwema amafindo ayisidina futhi kunikeza ukukhanya okufisayo.
I-Hipster Sika: Izinwele Zabantu Ezide Zonyaka
Ngo-2018 okhethwe unyaka wonke kwabesilisa abafuna ukugqama yi "Ama-Hipsters"; kuhle ngoba ivumelanisa nanoma yiluphi uhlobo lwezinwele kalula. Kufanele bavunyelwe ukuthi bakhule ngaphansi kwamahlombe bese izitayela zezinwele zizohlukahluka.
Ukuqedela lokhu kubukeka, amadoda badinga ukushiya intshebe ijiyile ngangokunokwenzeka. Ukuthinta kokugcina ukuhlanganisa zombili ngaphambi kokuphuma; umphumela ukubukeka okunesibindi, okuyindoda nokuhlubukayo; Kubalulekile ukukhumbula ukuthi izinwele akufanele neze zibonakale zingcolile noma zingcolile.
Ngalesi sinwele eside ungaphuma nezinwele zakho phansi nsuku zonke. Futhi kuyindlela enhle yokwakha umsila oyingxenye onemigexo eseceleni evulekile yokuvakasha ntambama; futhi kumcimbi wasebusuku ungaphonsa konke emuva ngomkhiqizo othile.
Amadoda anobuso obungunxantathu athandwa kakhulu lapho wenza lokhu kusika. Izendlalelo futhi ezihlathini zakhe zifihla izisihla ebusweni. Noma kunjalo, lesi sitayela singahlanganiswa nanoma ngubani, wonke umuntu angazisebenzisa uma ezizwa ekhululekile futhi ezethembile.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izitayela zezinwele » Izinwele ezinde zabesilisa
Shea ibhotela ngobuhle